सुदले कोइरालालाइ भेटेर के सल्लाह दिए ? | BIVAS
← धुमपान रोक्न जनचेतना	वामनलाई रक्षासचिवमा फर्काइने →	सुदले कोइरालालाइ भेटेर के सल्लाह दिए ?	01
नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत राकेश सुदविच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ । नयाँ सरकारको मन्त्रालय बाँडफाँटमा दलहरुबीच विवाद रहेको र न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणपनि अन्तिम चरणमा पुग्ने वेलामा भारतीय दूत सुदले कोइरालालाई सल्लाह दिने वताइपनि के भने भन्ने सम्वन्धमा जानकारि पाउन सकिएको छैन । बिहान ९ बजेदेखि करिब २५ मिनेट चलेको भेटमा कसैलाई पनि सहभागी गराइएको थिएन । कोइरालालाई भेट्न सुद महाराजगन्जस्थित कोइराला निवासमै पुगेका थिए ।
काँग्रेसबाट सरकारमा जान तीन नेताका तीन लिस्ट
कांग्रेसका तीन वरिष्ठ नेताले पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष सरकारमा पठाउने नेताहरूको बेग्लाबेग्लै लिस्ट बनाएर बुझाएका छन् । सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको तर्फबाट कांग्रेसका मन्त्रीहरूको नाम सोमबारसम्ममा टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका छन् । एमाले नेतृत्वको सरकारमा पार्टीको प्रतिनिधित्वका विषयमा विवाद तीव्र भइरहेको वेला वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यबाहक सभापति सुशील कोइराला र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार कोइरालालाई आ-आफ्ना पक्षको लिस्ट बुझाएको स्रोतले बतायो । कोइरालाले यस सम्बन्धमा सोमबार टुंगो लगाइने बताएका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकको निर्णय र सुझावहरूको बारेमा सभापति कोइरालालाई जानकारी गराउन आइतबार दिउँसो पार्टी नेताहरू कोइरालानिवास महाराजगन्ज पुगेका थिए । उनीहरूलाई सभापति कोइरालाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन ढिलो भइसकेको भन्दै सोमबारसम्ममा पार्टीको तर्फबाट नाम दिने प्रतिबद्धता जनाएको सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । सभापति कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरू पनि एमालेका साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्, भोलि सोमबारसम्ममा सबै सक्नुपर्छ ।’ कोइरालाले प्रधानमन्त्री नेपाललाई आइतबारसम्ममा नै पार्टीको तर्फबाट नाम दिने आश्वासन आफूले दिएको भन्दै एमालेसँग बसेर मन्त्रालयको विषयमा टुंगो लगाउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । भेटमा सहभागी नेताहरूले एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसमेत उपत्यकाबाहिर भएकाले दुई दलको बैठक बस्न नसकेको गुनासो गरेका थिए । कोइरालाले साझा कार्यक्रम, मन्त्रालयको बाँडफाँडलगायतका विषयमा बिहान नै काम सक्ने बताएको बुझिएको छ ।
कोइरालाले सोमबार बिहान ११ बजेभित्रमा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नामलाई अन्तिम रूप दिने बताउँदै बताएका थिए । त्यसअघि नै पार्टीले माग गर्ने मन्त्रालयको नाम दिनसमेत नेताहरूलाई आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । सभापति कोइरालासँगको भेटमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेललगायत पार्टीका पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए । त्यस क्रममा सभापति कोइरालाले पटकपटक छोरी सुजाताको नेतृत्वमा सरकारमा पठाउने आशय व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ । पार्टीको तर्फबाट अरूले सरकारको नेतृत्व गरे आफू सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै सुजाताले युवाहरूको चाहना र भावनाअनुसार आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने दाबी गरेको बुझिएको छ ।
उनले सुशीलमान शेरचन र धनराज गुरुङलाई पनि सरकारमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो । शेरचन सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको बुझिएको छ । उपसभापतिद्वय रामचन्द्र पौडेल वा प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना प्रबल छ । कांग्रेस उच्च स्रोतका अनुसार महामन्त्री विमलेन्द्र निधि, सुजाता कोइराला, मोहमदअस्ताव आलम, अजय चौरसिया, सूर्यमान गुरुङ मन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसैगरी सुप्रभा घिमिरे, उमा अधिकारी, महालक्ष्मी उपाध्यायमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी कांग्रेसले गरेको छ । प्रकाशशरण वा रामशरण महतमध्ये एक मन्त्री हुनेछन् । सभापति कोइरालालगायतका केही नेता रामशरणलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । कांग्रेसको भागमा अर्थ मन्त्रालय परेमा उनलाई सो मन्त्रालयको जिम्मा दिइने बुझिएको छ । भेटका क्रममा सरकारमा को-कोलाई पठाउने भनेर नेताहरूसँग सुझाव लिएको स्रोतको दाबी छ ।
← धुमपान रोक्न जनचेतना	वामनलाई रक्षासचिवमा फर्काइने →	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...